Yiziphi izinzuzo nobubi bokuthengisa ngama-imeyili? | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » I-imeyili Database Blogs » imeyili Marketing » Yiziphi izinzuzo nobubi bokuthengisa ngama-imeyili?
Iqiniso lokukwazi ukuxhumana nomuntu obhalisile ngokubonga kwakho ngokuba ne-imeyili yakho ngaphandle kokungabaza yinzuzo enkulu. Kepha hhayi ukuphela kwalokho. Kodwa-ke, kufanele futhi ucabangele uhlangothi lwe-B lwe-disc. Akukona konke pink.
Izinzuzo zokuthengisa nge-imeyili
Ithemba: i-imeyili isiteshi esihle kakhulu sokuthola ukuthembakala komfundi. Futhi lokho kubalulekile kuwe ukuthenga izinsiza zakho noma imikhiqizo.
Izindleko: ekuqaleni, ngohlobo lwamahhala lweMeilChimp uzoba nokwanele. Uyangabaza ukuthi udinga malini ukwethula ibhulogi yakho? Bheka lokhu okuthunyelwe futhi uzoba nesabelomali ngemizuzu ye-5.
Isivinini: imiphumela yomkhankaso wokuthengisa nge-imeyili uzizwa maduze. Imvamisa, cishe ngezinsuku ze-3.
I-ROI: leli isu lokumaketha ledijithali elinembuyiselo ephezulu kakhulu. Ngawo wonke ama-euro otshaliwe kubhekelelwa ukuthi uhola i- € 35. Lokho kusho i-ROI ye-3,500%.
Izithuthi: amandla amakhulu akhona. Ukudala i-autoresponder ukusebenzisa i-funnel yokuthengisa kuyafana nokuba nomthengisi we-vitamin othengisa imikhiqizo yakho. Futhi wonke amahora we-24 asebenzayo ngosuku, izinsuku ze-365 ngonyaka.
Ukuhlukaniswa / okwenziwe ngokwezifiso: nganoma iyiphi isoftware yokuthengisa ye-imeyili ungakha izingxenye ngaphakathi kohlu lwakho lwe-imeyili. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uthuthukise ulwazi lomuntu ofundile futhi unikeze kuphela lokho othakazelayo. Khumbula uSete Godin: ukhiye ukunikeza abantu lokho abakufunayo, akukho okunye.
Ukwethembeka: ngokuba nesandla kubhalisi njalo uzokhiqiza ukuthembeka. Kungumqondo wokuphindwaphindwa kwemithetho kaCialdini yokukholisa.
Izibalo: kukhona amathuluzi aphelele kunamanye, kepha wonke anesigaba sezibalo lapho ungabheka khona ukuthi yimiphi imikhankaso esebenza kahle kuwe. Lapha kubalulekile ukuthi wazi izinga lokuvula, iphesenti le-CTR (ngokuchofoza kusixhumanisi) kanye nenombolo yokulimala komkhankaso ngamunye.
Okubi kokumaketha nge-imeyili
Izindleko: lapho ufinyelela inani elithile lababhalisile kuzodingeka ukhokhele inguqulo ye-premium yethuluzi lakho lokuthengisa le-imeyili noma uzokwenza ngqo uma usebenzisa enye indlela nge-imeyiliChannel.
Ukuncintisana: i-imeyili ngayinye oyithumelayo kuyodingeka ilwe nawo wonke amanye ama-imeyili anqwabelana kubhokisi lokungenayo. Uma inkinga yakho ingadonseli ukunaka komsebenzisi, izolahlwa kuze kube phakade. Futhi konke ngamakhulu ambalwa emzuzwana.
Ukuqeqesha: Njengoba ngishilo ngaphambili, akukona ukuthumela i-imeyili ngoba. Ngokufanele, kufanele ufunde ngama-funnels okuthengisa, ukubhala kanye nokuthengisa nge-imeyili ukuthola imiphumela engaphezulu.
Ngizobe ngikhuluma iqiniso: ibhizinisi online elingahehi ababhalisile lifana nenkampani ngaphandle kwephothifoliyo yekhasimende . Ngaphandle kwe-imeyili ayikho indlela yokuxhumana nomuntu. Ulahlekelwa inketho yokumtshela ukuthi:
Uneposi elisha kubhulogi.
Wenze iphutha futhi ufuna ukuxolisa.
Uqale umkhiqizo omusha ozoba wusizo olukhulu.
Ngaphandle kwe-imeyili akukho ukuxhumana. Umane awunaso iklayenti.
← Kuyini ukungamakethi nge-imeyili?
Ungasakha kanjani isu lakho lokuMaketha le-imeyili →